तीन आयोजनाको म्याद सकिँदै, कस्तो रहला कृषि मन्त्रीको भूमिका ? « Pahilo News
तीन आयोजनाको म्याद सकिँदै, कस्तो रहला कृषि मन्त्रीको भूमिका ?
प्रकाशित मिति : 1 August, 2017 12:20 pm
१७ साउन । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै कृषि विकास मन्त्रीमा रामकृष्ण यादव आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद् यादवका लागि मन्त्री नौलो अनुभव हो । अहिले मन्त्रीमा यादव नियुक्त भएसँगै कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने उनको कार्यक्षमता हेर्न व्यग्र देखिन्छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागहरु मातहत धेरै आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । तर, मन्त्री यादवले यस्तो बेलामा मन्त्रालय सम्हालेका छन्, सो मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा ठूला आयोजनाहरु यही आर्थिक वर्षमा सकिँदै छन् । ती आयोजनाहरु पुनः सञ्चालन गर्नेगरी दातृ निकायहरुलाई मन्त्री यादवले कत्तिको प्रभाव पार्न सक्छन् ? अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले हेरिरहेका छन् ।
यही आर्थिक वर्षमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विस्तार आयोजना र साना तथा मझौला कृषि आयस्तर वृद्धि आयोजनाको अवधि सकिँदै छन् । यी तीन वटै आयोजनाहरु दातृनिकायको अनुदान र ऋण सहयोगमा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । यी आयोजनाहरुको बजेट वार्षिक २ अर्बभन्दा माथि नै रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी, नवनियुक्त मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई प्रभावशाली रुपले अगाडि बढाउन कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो पनि प्रतिक्षापूर्वक हेरिएको छ । गएको वर्ष मात्रै सुरु भएको र मन्त्रालयकै अहिलेसम्मको ठूलो उक्त आयोजनाको पहिलो वर्षको काम गराइ भने धेरै नै निराशाजनक देखिएको बताइन्छ । गत मंसिरदेखि प्रारम्भ भएको उक्त आयोजनाको साढे पाँच अर्ब बजेटमध्ये पौने तीन अर्ब खर्च नै हुन सकेन । कतैबाट स्वीकृत नै लिनु नपर्ने, सिधै खर्च गर्न सकिने उक्त आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसक्नुमा आयोजना प्रमुखको ढिलासुस्ती र कार्यशैलीलाई नै दोष दिन थालिएको छ । आयोजना प्रमुखले चाहेको भए धेरै रकम खर्च हुनसक्ने बताइन्छ ।